Ny karatra fandraharahana Flash Drive | Martech Zone
Ny karatra fandraharahana Flash Drive
Zoma, Febroary 1, 2013 Alahady, Martsa 24, 2013 Douglas Karr
Raha namaky ity bilaogy ity nandritra ny fotoana kelikely ianao dia fantatrao fa mpinono amin'ny teknolojia aho… sy ny karatry ny orinasa. Rehefa mifanena amin'ny olona iray aho ary manome karatra ahy izy ireo dia mitsaratsara tokoa. Omaly, nihaona tamin'i Rob Bacallao avy any Staffing maranitra ary nomeny ahy ity hatsarana ity:
Ny karatra fandraharahana flash Wafer avy any Flashbay mahafinaritra be - tonga amin'ny kinova 2Gb, 4Gb, 8Gb ary 16Gb, ity ny famaritana an-tserasera:
Ny karatra USB Wafer dia iray amin'ireo karatra USB manify indrindra eto an-tany amin'ny hatevin'ny 2.2mm fotsiny. Ny lafiny roa amin'ny USB Card dia azo sary pirinty tanteraka amin'ny loko marevaka. Ny faritra be marika dia hanome antoka fa malaza be ny sary famantarana anao - ny ankamaroan'ny orinasa dia aleony mandefa endrika feno handrakofana ny karatra USB iray manontolo fa tsy ny sary mijoro irery. Ny karatra USB dia misosa tsara ao am-paosinao, poketra na mpikarakara ary maka toerana kely.
Toa mpaka sary vetaveta aho, dia hividy boaty amin'ireo mba hanipazako santionany!
Tags: karatra fandraharahanakaratra fandraharahana tselatraflashbayflashdriveTechkaratra fisaka
Natao ho mora ny fandikana raki-peo sy horonan-tsary: ​​Speechpad
Ny endri-javatra 11 Top an'ny Windows 8
1 Feb 2013 tamin'ny 11:03 maraina
Clever. Mety ho tsara izany 5 taona lasa izay, saingy izao dia heveriko fa mety kokoa ny rohy mankany amin'ny YouTube na Vimeo.
1 Feb 2013 tamin'ny 11:10 maraina
Ary tsy dia lafo loatra…. fa tsy dia milay! 🙂
2 Feb 2013 tamin'ny 11:32 maraina
Aleo ferana ireo mifanerasera mendrika anao indrindra. 7 $ ka hatramin'ny $ 10 / isanisany ny vidin'izy ireo.
2 Mey 2013 tamin'ny 7:29 hariva
Ny resaka fiverenana ihany no resahina… fa lafo izy ireo.